YAAB Muqaal Haweenay Reer Australia Ah oo Dunida Kula Soo Wareegtay “Ninkeedii oo Dhintay” | Baahin Media
YAAB Muqaal Haweenay Reer Australia Ah oo Dunida Kula Soo Wareegtay “Ninkeedii oo Dhintay”
Lamaane ka soo jeeda mgaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa waxey ku heshiiyeen iney safar ku kala bixiyaan daafaha kala duwan ee dunida, marka ay fursaddu u saamaxdo, laakiin qadarta ayaan u ogolaan weyday iney ballankii ay wadajirka u galeen ay oofiyaan, maadama uu ninkii ku dhacay kansarka jirka, kadibna uu geeriyooday.
Paul Biyoorik, markii uu galay daaweyn badan oo jirkiisa daciifisay ayuu geeriyooday, laakiin inta aanuu dhiman ayuu xaaskiisa Misheel kala dardaarmay iney dhammeystirto arrinkii ay ku ballameen oo ay rumeyso riyadooda oo ahayd iney dunida si wadajir ah ku soo wada maraan.
Michelle Ballantii wey oofisay ballantii ay ka qaadday ninkeeda geeriyooday ee ay is qabeen muddo 25 sano ah, waxey sameysay baakado ay u ekeysiisay qof oo ay surtay sawirka ninkeedii dhintay, waxeyna gashay safar ay ku kala bixineyso daafaha kala duwan ee dunida.
Misheel biyoorik waxey tiri: “Waxaan u sheegay inaan sawirkiisa qaadan doono ama jismi kaartoon ah oo shaqsiyaddiisa mataleysa, Bowl waxa uu ahaa qof kaftan badan, boorsooyinkeyga ayaa xirxirtay waxaan sii qaatay kaartoon aan ninkeyga u ekaysiiyay oo aan iga harin safarkii aan ku kala bixiyay daafaha kala duwan ee dunida.”
Haweenaydan ayaa waxaa u suurtagashay, illaa iyo hadda, iney booqto qasriga boqortooyada Ingiriiska ee Buckingham gudaha Ingiriiska, New York, Scotland, Ireland. Michelle waxaa ka go’an iney ninkeeda u qaadato Honkong, cimirigeeda intiisa badan waxey la qaadatay Bowl haddana ma dooneyso iney wax ka bedesho nolosheeda.